Ny Planes Tsy cathing ny hisosa tehezany.
Important Ny Planes Tsy cathing ny hisosa tehezany.
1 taona 10 volana lasa izay #479 by geniousabhishe1
Raha ny marina dia alaina 737 164 fanamian'ny fototra entana sy B787 base entana ary rehefa manidina fa-pahitako fa tsy misambotra ny manidina hantsana. Tsy mandeha ho azy miaraka amin'ny tsipika fiaingana fa tsy hoe nambabo ny hisosa hantsana.
1 taona 10 volana lasa izay #482 by Gh0stRider203
Tsara maraina (OK tsara ara-teknika tolakandro eto Texas).
I Matetika manidina ny B747-400LCF ny ankamaroan 'ny fotoana, ary efa nahatsikaritra fa koa ny ankabiazany ny fiaramanidina. Tsy azoko antoka hoe nahoana izany hoe, ny marina. I miezaka ny tsara tarehy tsara mikasika ny "manidina ny baolina" tanana, fa hanao ny marina ... dia tsy mba matoky ny solosaina hanao izany ho Ahy LOL fantatro ny Uh QW757 no manao izany, fa tsy amim-pahatsorana mahatonga ahy natahotra LOL
1 taona 10 volana lasa izay #497 by Tonny0909
Ataovy azo antoka fa rehefa mametraka "Fomba Fiasa" ao amin'ny, ianao mankarary "alt HLD"
Manaraka mpisera (s) nanao hoe: Misaotra: Gh0stRider203, JanneAir15
1 taona 10 volana lasa izay #500 by JanneAir15
Aa ... ankehitriny dia fantatro hoe nahoana aho no nanana olana tamin'ny tetikasa A380 Airbus. Misaotra betsaka anareo indray Tonny0909 manampy!
1 taona 10 volana lasa izay #518 by geniousabhishe1
Misaotra ho an'ny soso-kevitra fa ny olana nanjavona rehefa nahazo sp2 nametraka teo amin'ny rafitra.
1 taona 10 volana lasa izay #519 by WilliamB
Nanana olana izany, aloha sy ny fomba tsara indrindra hiatrehana tokoa ny na mametraka ny Localiser tany aloha ary miaraka amin'izay koa ny ambony, na ny mitovy elanelana avy amin'ny fiaingana, fa ambany amin'ny Altitude. Inona no mety hanampy koa dia raha toa ianao raha vao hametraka ny ILS tsindrio fomba Hahazo. manandrana ireo ary raha tsy manao ny fitaka fiambenana amin'ny YouTube, na toeran-kafa. Ny ankamaroan'ny manodidina localisers any 2000-2500ft ho toy ny toerana tsara indrindra mba ho. Omeo azy rehetra lasa izay.
Fotoana mamorona pejy: 0.241 segondra